देबेन्द्र केसी, नयाँ दिल्ली माघ १४ । नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाका तत्कालिन स्वकिय सचिव गोकर्ण पौड्यालले देशमा संघियता टिक्नै नसक्ने बताउनु भएको छ । स्टक राजनितिक भ्रमणको क्रममा नयाँ...
अनिल खत्री, गुल्मी माघ १३ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गुल्मीले स्थानिय तहको पार्टी एकता एबं कमिटीलाई पूर्णता दिने काम सम्पन्न गरेको छ । जिल्लाका १२ वटै स्थानिय तहलाई पूर्णता दिने काम सम्पन्न गरे लगत्तै...
टोपलाल अर्याल, गुल्मी पुष २९ । गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघमा व्यावसायीहरु बिच बिबाद चुलिदै गएको छ । जसका कारण अधिवेशन समेत स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । लामो समयसम्म दलहरुले सहमतिको प्रयास गरेका थिए...
डिआरजी सुमन घिमिरे, अर्घाखाँची पुष २८। डिआरजी : अध्यक्ष ज्यु …विवेकशील साझा फुट्यो भन्ने हल्ला चलेको छ । तपाई कुन पक्षमा हुनु हुन्छ ? आज वताई दिनु जनता जान्न चाहान्छ । हरि : हाहा बताउन मिल्दैन...
काठमाडौ, पुष २७ । विवेकशील साझा पार्टी फुटेको छ । साझा पार्टीका दुई जना संयोजक मध्ये एक संयोजक उज्वल थापाले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता दिएका छन । पार्टी ३७ जना केन्द्रीय समितिमा...
गुल्मी, पुष २७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इस्मा गाउँपालिकाको सपथ ग्रहण सम्पन्न भएको छ । नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश सासद दिनेश पन्थी गाउँकमिटीका सबै सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराए । नारायण पैयानीको अध्यक्षतामा ७५ सदस्यीय...
काँग्रेस प्यूठानका पुराना नेता केसर बहादुर जिसिकाे निधन
साझा नेटवर्क,प्यूठान पुष २७ । नेपाली काँग्रेस प्यूठानका पुराना नेता केसर बहादुर जिसिकाे ८२ वर्षको उमेरमा आफ्नै निवास झिमरुक ५ मच्छिमा निधन भएकाे छ । २०४६ सालदेखि नेपाली काँग्रेसमा सक्रिय रहदै आएका जिसी गाउँ...
नगरपालिकाका प्रमुखलाई कालोमोसो भ्रष्टहरुलाई नछोड्ने विप्लवको चेतावनी
साझा नेट्वोर्क, बुटवल पुष २४ । प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको प्रमुख नेत्रबहादुर रोकायलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यकक्षमा प्रबेश गरी कालोमोसो लगाएको छ् । आफ्नो पार्टीको नाममा बेनामी चेक काटी भ्रष्टाचार गरेको उपभोक्ता समितिमा पार्टीका...
टोपलाल अर्याल, गुल्मी पुष २२ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गुल्मीले अहिले स्थानीय तहहरुमा सपथ ग्रहणको लहर चलाएको छ । स्थानीय तहका अध्यक्ष र सचिवलाई पार्टी कार्यालयमै बोलाएर पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराइएको छ । नेकपाका...
रघुफेंदी प्रतिमाननिमा माविमा नेविसंघको सङ्गठन विस्तार
साझा नेटवर्क,पुष २२ गुल्मी । समाजमा रहेका बेथिती,अनियमितता र भ्रस्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउने उदेश्यका साथ मदाने गाउँपालीका अन्तरगत रघुफेदि प्रतिमाननिमा माध्यामीक विद्यालय अग्लूंग मा आज एक कार्यक्रमका बिच नेपाल विधार्थी संघको ईकाई समिति गठन गरिएको...
अर्घाखाँची, पुष २१ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय यातायात मजदुर युनियन अर्घाखाँचीको अध्यक्षमा पूनः गोविन्द बन्जाडे निर्बाचित हुनुभएको छ । सन्धिखर्कमा सम्पन्न छैठौं जिल्ला भेलाले अध्यक्ष बन्जाडेको नेतृत्वमा ३ सल्लाहकार सहित १२ सदस्यिय जिल्ला समितिको सर्वसहमत...
नेकपाको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
कमल पौडेल, बागलुङ पुष २१ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टि (नेकपा) बडिगाड गाउँपालिका वडा नं. १ दगातुन्डाडाको आयोजनामा एक दिने अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम तुन्डाडामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेकपाका प्रदेश कमिटि सदस्य प्रदिप खरेल, राजिव घिमिरे,...
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाएका छौँ : मन्त्री ज्ञवाली
हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी पुष १४ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले नेपालले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गरेको बताएका छन् । छिमेकी मुलुकका साथै विश्वका अन्य मुलुकहरुमा समेत नयाँ र नेपालको हितमा सम्झौता गरेकोले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर रहेको दाबी...